डोजर चलाउँदै भाइरल बनेकी यि सुन्दरी डोजरवालीको चौतर्फी चर्चा – Gazabkonews
डोजर चलाउँदै भाइरल बनेकी यि सुन्दरी डोजरवालीको चौतर्फी चर्चा
सामाजिक सञ्जालमा दिनहुँ जसो बिभिन्न किसिमका घटनाहरू बाहिरिने गरेको छ। कतिपय घटना बाहिर आउँछ र सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने गरेका छन् भने कतिपय बिषय आलोचना र सामाजलाई नपच्ने खाले पनि छन् र हुन्छन्। केही दिन अघि केही नेपाली साहसिक चेलिहरुको भिडियो भाइरल भएको छ। चियावली,पेन्टरवली पछि अहिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा डोजरवलि दिदीको भिडियो भाइरल बनेको छ। नेपालमा केटा मान्छेले डोजर चलाएको त तपाइँ हामीले देखेकै छौ तर यहा एक जना करुणा नाम गरेकी हिम्मतवाली युवतीले भिर पाखामा डोजर चलाउदै छन् ।
आफूले केही वर्ष जागिर गरी खाई नखाई गरी जोगाएको पैसा र बैँक बाट लोन लिएर करिब १६,१७ लाख लगानी गरेर होटल सन्चालन गरेको थिईन। होटल सन्चालन गरेको १ महिना मै लकडाउन भएपछि उनको जिवनमा अर्को मोड सिर्जना भएको रहेछ। तर विदेश जाने योजना रद्द गरेर अहिले नेपालकै भिर पाखामा डोजर चलाउदै आएकी छिन । उनले चलाउने मात्र नभई सामान्य बनाउने पनि गर्छिन ।अहिले आफुले डोजर चलाउन सिक्दै गरेकोले कुनै आम्दानी नभएको पनि उनि बताउछिन। भिडियो हेर्नुहोस्ः
सुटुक्क अन्तरजातीय विबाह गरेर छोरो पाइसकेको लामो समय बित्दा पनि सुध्रिएनन् दुर्गेश थापा, कलेजकी युवतीसँग यस्तो अवस्थामा देखापरेपछि भयो खैलाबैला, सँधै किन विबादमा मात्रै तानिन्छन् दुर्गेश ? पत्रकारले नानाथरी प्रश्न गरे भन्दै एक्कासी झो क्कि ए, हेर्नुहोस् सुटुक्क अन्तरजातीय विबाह गरेर छोरो पाइसकेको लामो समय बित्दा पनि सुध्रिएनन् दुर्गेश थापा, कलेजकी युवतीसँग यस्तो अवस्थामा देखापरेपछि भयो खैलाबैला, सँधै किन विबादमा मात्रै तानिन्छन् दुर्गेश ? ‘तिमी यसै लजायो’, ‘बोलायो बोलायो पोखरेली मायाले’ र ‘लै बरी लै’जस्ता दर्जनौ हिट गीत दिईसकेका गायक सपन श्रेष्ठ नयाँ गीत लिएर र्आकमा छन्। गायिका स्मिता दाहाल र सपनको स्वरमा‘ट्रेन्डिङ नं १’ मा मुनाल शिशिर कोइरालाको शब्द र दीपक शर्माको संगीत तथा कुशल सिंहको एरेन्ज रहेको छ।
गीतमा दुर्गेश थापा, पल शाह, सासंग एमटी र पुण्य गौतम लाई फिचर्ड गरिएको छ। पछिल्लो समय पल शाह र दुर्गेश थापाको म्युजिक भिडियो जोडी नि निकै जमेको छ। यस गीतमा पनि गायक श्रेष्ठले दुईलाई फिचर्ड गराएर यस भिडियोबाट राम्रै आशा राखेका छन्। ‘मैले अहिलेको ट्रेन्डलाई फ्लो पक्कै गरेको हुँ’, गायक श्रेष्ठले भने, ‘भिडिओले पल र दुर्गेशलाई मागेको हुनाले उनीहरुलाई खेलाएको हुँ, भिडिओ राम्रै बनेको छ। म खुशी छु।’
गीतमा अहिले चलेको युट्युब ट्रेन्डिङलाई मायासँग जोडिएको छ। मायालाई ट्रेन्डिङ सरह अमूल्य छ भन्ने भावलाई गीतमार्फत प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिएको छ।
भिडियोमा अर्जुन तिवारीको सिनेमाटोग्राफी, शिलन लम्सालको सम्पादन तथा कलर, सुरेन बस्सेलको कोरियोग्राफी रहेको छ। कन्सेप्ट र निर्देशन भने मुनाल शिशिर कोइरालाको रहेको यस गीतको भिडियोलाई डी सिरिज युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ। हेरौँ भिडियो